အိန္ဒိယတွင်စကျင်ကျောက်ပေါ်ရှိ Slab ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ
စကျင်ကျောက်ကြွေပြားများသည်သဘာဝကျောက်တုံးများအတွက်ကောင်းသောအလှည့်အပြောင်း၌မခံရပါ ကြာချိန်။ ထိုလက်တဆုပ်စာကောင်းသောအရာသည် Bygone တွင်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်များရှိသည်မှာသေချာသည် အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၌ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. ရက်များနှင့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အချိန်သည်ပြောင်းလဲနေသည် ကျောက်ခေတ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်. ကြွေပြားများသည်ကြံ့ခိုင်ပြီးခက်ခဲသော, ရေရှည်တည်တံ့ခြင်း, ရေစိုခံခြင်းနှင့်ဖုန်မှုန့်များနှင့်ဖုန်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာရှိသည် ဂုဏ်သတ္တိမောင်များ. countertops များအတွက်ကြွေပြားချပ်ချပ်တစ်ခုသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်သည် လေးလံသောမီးဖိုချောင် area ရိယာသို့မဟုတ်ရုံးခန်းနေရာ. ၎င်း၏ကျယ်ပြန့်ဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းမှုများကြောင့်နှင့် ပုံစံများ, ၎င်းသည်စီးပွားဖြစ်နေရာသို့မဟုတ်လူနေအိမ်နေရာအတွက်ဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုများကိုပြုလုပ်သည် ပိုပြီးပျော့ပျောင်း.
ကြွေကြွေထည်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာထုတ်လုပ်ခြင်းမှထုတ်လုပ်သည် Kaolinite ဟုလူသိများသောရွှံ့စေးနှင့်သဲများကဲ့သို့သောသတ္တုဓာတ်များ, ကြွေထည်ကိုခွန်အားနှင့်အရောင်ကိုပေးသောပုံဖော်သည့် alabartz, alabaster နှင့် silica ကြွေအရောအနှော. ကြွေကြွေထည်အရောအနှောကိုပါးလွှာ။ ကြီးမားသော format များအဖြစ်ပုံဖော်ထားသည် သတ်မှတ်ထားသောအပူချိန်တွင်တစ်ကီလိုမီတာတွင်အပူဖြင့်အပူပြားများ.
စကျင်ကျောက်ကြွေထည်သည်အတော်လေးခိုင်မြဲသောမျက်နှာပြင်ဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်စဉ်းစားသည် စီးပွားဖြစ်နှင့်လူနေအိမ်ရာတွင်နှစ်မျိုးစလုံးကိုစတင်ခြင်းမပြုနိုင်သောအမြင့်ဆုံးနေရာများ, သဘာဝကျခြင်း, နစ်မြုပ်ခြင်း, စွန်းခြင်း, ဓာတုသို့မဟုတ်မတော်တဆ. သူတို့ကထူးခြားတဲ့နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြု။ ထုတ်လုပ်ကြသည် တစ် ဦး inkjet အဖြစ်လူသိများပုံနှိပ်နည်းပညာ. ထိုကဲ့သို့သော granite သို့မဟုတ်စကျင်ကျောက်အဖြစ်သဘာဝကျောက်တုံးများ ကြွေကျောက်သည်တူညီမှုကင်းမဲ့ခြင်း, ဆန့်ကျင်တွင်, စကျင်ကျောက်ထိပ်ပိုင်းဆပ်ပြာ, အလယ်အလတ်အရွယ်ရှိကြွေပြားသို့မဟုတ်တိုင်းကြွေပြားများသည်ဒီဇိုင်းတွင်တူညီမှုရှိကြသည်။ texture နှင့်အရောင်. ဒါကြောင့်သင်နည်းနည်းအားလပ်ချိန်တွေဒါမှမဟုတ်အလုပ်ကနေရက်အနည်းငယ်ချွတ်မလိုအပ်ပါဘူး သို့မဟုတ်အနိမ့်အ0င်ကြော slab ထုတ်လုပ်သူသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အရေးကြီးသောအချိန်ဇယား စီမံကိန်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အကန့်အသတ်ချမ်းသာချောင်းများ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သောအသင်္ချာနိမ့်ကျသော Slab စုဆောင်းမှုကိုလေ့လာပါ :
ကြွေပြားများသည်6မီလီမီတာ, 12 မီလီမီတာ, စီးပွားဖြစ်နေရာများနှင့်လူနေအိမ်နေရာများအတွက်အသင်္ချေကြွေပြားများနှင့် ကြွေပြား patio slabs, အပြင်ဘက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်, အပြင်ဘက်ကြွေပြားခင်းပြားများဖြစ်သည်။ ကြွေထည်နံရံနှင့်ကျောက်ပြားပြား, သူတို့ဖြစ်ကြသည်မီးဖိုချောင် area ရိယာ၌တည်၏ ကြွေပြားအဟန့်အတားများ, ကြွေထည်ကြမ်းခင်းနှင့်နံရံများ, နှင့်ကြွေပြား Slab ရေချိုးခန်းအဖြစ်ရေချိုးခန်းထဲမှာ နှင့်ပိုပြီး.
GAAUDE TORCELAIN SLABS ကို install လုပ်ခြင်းသည်အလွှာ၏ထိပ်တွင်ပြုလုပ်သည် ဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့သို့မဟုတ်သိပ်သည်းမြှုပ်ခြင်း. ဤသည်အတားအဆီးသို့မဟုတ်ကူရှင်ကိုဖန်တီးရန်လုပ်သည် စကျင်ကျောက်ကြွေနှင့်ထောက်ခံမှုအကြားယေဘုယျအားဖြင့်အစိုင်အခဲအတွက်ကျောက်တုံး နံရံများနှင့်အတူနံရံများနှင့်အထပ်သား. အကောင်းဆုံးကြွေကြွေပြားများဖြစ်နိုင်သည် ကျောက်တုံးကျောက်တုံးကျောက်တုံး, ကျောက်တုံးကျောက်တုံး, သဘာဝမဟုတ်ဘဲလူလုပ်မဟုတ်. စကျင်ကျောက်ကြွေ၏အရပ်သည်ပါးလွှာသည်, ပေါ့ပါးတဲ့ပစ္စည်းက. ထို့ကြောင့်ကြွေအလွယ်တကူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အလွယ်တကူဖြစ်နိုင်သည် ပြား, လုပ်ကွက်များနှင့်ပိုပြီး installable.
အဆိုပါ glazed ကြွေပြားများကမှေးမှေး၏တောက်ပဌန်နှင့်အတူလာကြ၏ တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသောတောက်ပမှု, လွင်ပြင်များ, အဖြူရောင်ကြွေပြားများမှအရောင်များကိုရောင်စုံကြွေပြားများအထိအရောင်များ, ပုံစံစည် ကြွေစကျင်ကျောက်စကျင်တံသင်, Mosaic ကြွေပြားများ, သစ်ခုတ်လှဲ, နောက်ထပ်; နှင့်စပါးရိတ်ခြင်း,.
ကျနော်တို့က ဦး ဆောင်ကြွေပြားထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြ၏. ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြွေပြားချပ်ချပ်ထုတ်ကုန်များကိုကမ်းလှမ်းသည် များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အသွေးစုံဆိုင် - အနက်ရောင်, အဖြူ, မီးခိုးရောင်, အစိမ်းရောင်, အနီရောင်ကြွေပြား, ပန်းရောင်စကျင်ကျောက်ပေါ်တူဂီ, အပြာရောင်ကြွေပြား,.